जति वि'रोध गरेपनि वामदेव ओलीकै पक्षमा, प्रचण्ड-नेपाल पक्ष नि'राश ! -
जति वि’रोध गरेपनि वामदेव ओलीकै पक्षमा, प्रचण्ड-नेपाल पक्ष नि’राश !
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ श्रावण बुधबार
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपामा चुलिएको विवाद मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्ष आमनेसामने भएर केही दिनका लागि थामिने परिस्थिति निर्माण भएको छ।
मंगलबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री ओली पक्षले एकलौटी रूपमा स्थगित गर्न खोजेपछि दुवै खेमा बालुवाटारमा आमनेसमाने भएका थिए।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गरेको बैठकको सूचना उल्लंघन गर्दै बालुवाटारमै स्थायी कमिटीको बैठक मात्र गरेनन्, उनीहरूले एकलौटी रूपमा बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विधान उल्लंघन गरेको निर्णय पनि गरे। उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर अर्को बैठक तोक्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने स्थायी कमिटी बैठक हलभन्दा केही सय मिटर पर आफ्नै निवासमा आफू नजिकका नेताहरूसँग अनौपचारिक भेला र छलफल गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्तिमा एक पदबाट हट्न दवाब दिइरहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहको बहुमत भएको स्थायी कमिटी बैठकले मंगलबार प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने कुनै निर्णय नगरेकाले बालुवाटारले ठूलो राहत महशुस गरेको छ। साथै, वामदेव गौतमले ल्याएको प्रस्तावले पनि बालुवाटारलाई त्राण मिलेको छ।
उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी एकता रक्षा गर्न भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। त्यही प्रस्ताव उनले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि राखे।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री रहन दिने, महाधिवेशनसम्म उनी नै अध्यक्ष रहने र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा सक्रिय बनाउने उनको प्रस्तावको मूल अंश हो।
विवाद चुलिएका बेला र स्थायी कमिटीका सदस्यको बहुमत प्रचण्ड-नेपालसँग भएका बेला वामदेबाट आएको यस्तो प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो ‘त्राण’ दिने काम गरेको छ।
प्रचण्डले अध्यक्षता गरेको र प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेता अनुपस्थित मंगलबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित २९ जना स्थायी कमिटी सदस्य उपस्थित थिए। ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका २९ जना एकै ठाउँमा भेला हुनु प्रधानमन्त्रीका लागि आफैंमा चुनौती हो।
यो भेलालाई ओलीइतर समूहले स्थायी कमिटी बैठक भनेको छ। बैठक सुरू भएलगत्तै प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ ले स्थायी कमिटी बैठक सुरू भएको सूचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका थिए। पछि प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको भनेर पनि प्रचण्डको फेसबुक पेजमा सूचना राखिएको छ।
पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले साउन १३ गते बस्ने भनिएको बैठक बसेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। ओली पक्षका नेताहरूको बहिष्कारबीच पनि स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको प्रचण्ड-नेपाल निकटका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
यो बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले भने अनौपचारिक छलफल मात्रै भनेका छन्। बैठकले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेहरूलाई अझै निराश बनाएको उनीहरूको दाबी छ। यो दाबीको सबभन्दा बलियो प्रमाणका रूपमा उनीहरूले उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावलाई लिएका छन्।
उपाध्यक्ष गौतमले बैठकमा आफूले पेस गरेको ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए। जुन प्रस्तावले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै ठूलो सहयोग पुग्छ।
बैठकमा बोल्दै गौतमले पार्टीमा अहिले देखिएको संकटको मुख्य कारक भने ओली रहेको बताएका थिए।
‘यति धेरै साथीले छोड्नुस भन्दा पनि उहाँले छोड्नुहुन्न। केपीबाट पार्टी पनि र सरकार पनि चल्दैन भनेर मैले एक वर्षअघि भनेको हो। त्यो बेला माधव कमरेडले सच्चिन दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘अहिले पनि यत्रा साथीहरूले छोड्नुस् भन्दा उहाँले छोड्ने कुरै गर्नुहुन्न। उहाँसँग आलोचना सुन्ने साहस छैन। उहाँ कम्युनिस्ट हुन योग्य मान्छे नै होइन।’
प्रधानमन्त्री ओलीका कमजोरी भए पनि उनले पार्टी फुटाउन सक्ने भएकाले आफूले उनलाई अहिल्यै नहटाऊँ भनेको भन्दै गौतमले स्पष्टीकरण पनि दिएका थिए।
‘हामीले यस्तो व्यक्ति बोकेका छौं, जसले फोहोर मात्रै बोकेको छ, तर जसलाई फाल्दा तत्काल दुर्घटना हुने डर पनि छ। त्यसैले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट नहटाऊँ,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘मैले ६ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको छु। पार्टीलाई फुटको दिशाबाट जोगाउन यसलाई कार्यान्वयन गरौं।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘दुष्ट’ भन्दै पार्टीमा अहिले ‘दुष्टसँग दैव पनि डराउनुपर्छ’ भन्नेजस्तो भएको बताए। गौतमले प्रधानमन्त्रीको जति आलोचना गरे पनि उनको प्रस्ताव भने ओलीलाई नै फाइदा पुग्ने खालको छ। त्यसले ओलीलाई ‘त्राण’ दिएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षकै एक सांसदले बताए।
स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्ताव सहमतिको विन्दु हुन सक्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन नपर्ने कुरा सावित भइसकेको छ। आज भएको भेलामा पनि ३-४ थरी कुरा आएको भन्ने छ।उपाध्यक्षले पार्टी एकताको पक्षमा प्रस्ताव पेस गर्नुभयो। सबैले मान्ने हो भने त्यो एउटा विन्दु हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘दुई अध्यक्षको सहमति नभइकन बैठक बस्दैन। एउटा अध्यक्षको सहमतिमा अर्को अध्यक्षले बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ, तर एउटा अध्यक्षको सहमति नभइकन अर्को अध्यक्षले बैठक बोलाउने भनेको सरासर विधानको खिलाफमा हो।’
उपाध्यक्ष गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावले त्राण पाएका ओली मंगलबार साँझै उनलाई भेट्न भैंसेपाटीस्थित गौतम निवास पुगेका थिए।
पारिवारिक भेटघाटका लागि भन्दै भैंसेपाटी पुगेका ओली डेढ घन्टाभन्दा बढी बसेका थिए। प्रधानमन्त्री र उनकी पत्नी राधिका शाक्य अनि वामदेव गौतमका परिवारका सदस्यसहितको तस्बिर सार्वजनिक हुनुले पनि यसलाई पारिवारिक भेट भन्न सकिन्छ। तर, यसलाई नेकपाभित्रै कतिले प्रधानमन्त्रीको ‘डिनर डिप्लोमेसी’ समेत भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र गौतमको पारिवारिक जमघटमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए। गौतम र पौडेल भैंसेपाटीमा छिमेकी हुन्।
गौतमको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग समेत राखेका छन्।
महाधिवेशन नभइकन अध्यक्ष नछाड्ने र संसदीय निर्वाचन नभइकन प्रधानमन्त्री नछाड्ने ओलीको अडान कायमै रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
‘आजको भेलालाई प्रधानमन्त्रीले खासै चासो दिनुभएको छैन। भेलामा सहभागी साथीहरू नै बाझाबाझ गरेका छन्। फेरि पनि सहमतिको विकल्प छैन,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘मेरो बुझाइमा वामदेव कमरेडले दिएको सुझावकै वरपर सहमति हुन्छ।’
ओली र प्रचण्डलाई राम्रोसँग बुझेका वामदेवले ल्याएको प्रस्तावमै रहेर अहिलेको सहमति हुने ती सचिवालय सदस्यको दाबी छ।
मंगलबारको बैठकमा पूर्वमाओवादी तर्फबाट गृहमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा सहभागी थिएनन्।
त्यसो त अन्य कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरू समेत पार्टी एकताको विकल्प नरहेको भन्दै दुई अध्यक्ष मिलेरै जानुपर्ने पक्षमा छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बैठकमा बोल्ने सबैको चिन्ता पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताए।
‘हामीले एकताका लागि सहमति खोज्नुस् भनेका छौ। संविधान र सरकार सबैलाई जोगाउन एकताको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘बहुमतले निर्णय गर्न भन्दा बैठक स्थगित गरेर एकताको निम्ति भूमिका खेल्न प्रचण्डलाई भनेका छौं।’
मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रचण्ड‍-नेपाल खेमा ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा पुगेको छ।
‘अब केही दिन फेरि दुई अध्यक्षबीच छलफल र सहमतिको प्रयास हुन्छ,’ प्रचण्ड-नेपाल खेमाका एक नेताले भने, ‘सहमति भएन भने प्रक्रियामै गएर निर्णय गर्ने वा के गर्ने फेरि हामी बसेर छलफल गर्छौं।’
गौतमले जे प्रस्ताव ल्याएको भए पनि त्यसको खासै धेरै महत्व नहुने पनि उनले दाबी गरे।
‘उहाँ तरंगित भइरहनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिले कता लाग्नु हुन्छ, कहिले कता। तर उहाँ जता लागे पनि स्थायी कमिटीमा त्यसले संख्यात्मक रूपमा खासै फरक पर्दैन।’
अब केही दिन छलफल मूल रूपमा गरेर प्रचण्ड र माधव नेपाल दुई जनाले जे निर्णय गर्छन्, त्यहीअनुसार यो खेमा अघि बढ्ने उनले दाबी गरे। (सन्जिव बगाले/सेतोपाटी)
‘पार्टीको आन्तरिक विवादमा राष्ट्रपति संक्रिय हुनु मर्यादा उल्लंघन’ – नेता रावल
जंगबहादुर पछिका सबैभन्दा सहासिक प्रधानमन्त्री केपी ओली